Ngaba Ngokwenene UThixo Ulilibale Iimpawu Zethu?
Istamente elimangalisayo kwiMandla kunye nesininzi sokuxolela kukaThixo
"Libala ngayo." Kwamava am, abantu basebenzisa eli binzana kwiimeko ezimbini kuphela. Eyokuqala xa bezama ukunyamekela kwiNew York okanye eNew Jersey ukuvakalisa - ngokuqhelekileyo ngokuphathelele kwi -Godfather okanye i-mafia okanye into enjengaleyo, njenge "Fuhgettaboudit."
Enye into xa sixolela omnye umntu ngenxa yamatyala amancinane. Umzekelo, ukuba umntu uthi: "Ndiyaxolisa ndadla umnikelo wokugqibela, uSam.
Andizange ndibone ukuba awuzange ube nalunye. "Ndingaphendula ngento enje:" Akuyona into enkulu. Libala ngayo."
Ndingathanda ukugxila kwingcamango yesibini yale nqaku. Kungenxa yokuba iBhayibhile yenza into emangalisayo malunga nendlela uThixo axolela ngayo izono zethu - zethu izono ezincinci kunye neentsilelo zethu ezinkulu.
Ukuze uqalise, jonga kula mazwi alumkileyo avela kwiNcwadi yamaHebhere :
Ngokuba ndiya kubaxolela ububi babo
kwaye abayi kuphinda bakhumbule izono zabo.
Ndiyifunde le ndinyana nje ngethuba lokulungisa isifundo seBhayibhile , kwaye ndicinga ukuba, Ngaba kunjalo? Ndiyaqonda ukuba uThixo uyasusa yonke isohlwayo xa exolela izono zethu, kwaye ndiqonda ukuba uYesu Kristu sele esethathe isijeziso ngenxa yezono zethu ngokufa kwakhe esiphambanweni. Kodwa ngaba uThixo uyayikhohlwa ukuba sonile ekuqaleni? Ngaba oko kunokwenzeka?
Njengoko ndathetha nabanye abahlobo abathembekileyo malunga nale mbandela - kuquka umfundisi wam - ndiyakholwa ukuba impendulo nguwewe.
Ngokuqinisekileyo uThixo uyalibala izono zethu kwaye akayikukhumbula kwakhona, njengoko iBhayibhile ithi.
Iindinyana ezibini ezibalulekileyo zandinceda ndiqonde ngakumbi le ngxaki kunye nesisombululo sayo: INdumiso 103: 11-12 kunye noIsaya 43: 22-25.
Masiqale ngala mifanekiso emihle evela kuKumkani uDavide, umdumisi:
Kuba phezulu njengamazulu ngaphezu komhlaba,
Inkulu kakhulu uthando lwakhe ngabo bamhlonelayo;
kude kusempuma kusentshonalanga,
Ude wasusa kude zethu izono zethu.
INdumiso 103: 11-12
Ngokuqinisekileyo ndiyaqonda ukuba uthando lukaThixo luthelekiswa nomgama phakathi kwamazulu nomhlaba, kodwa yile ngcamango yesibini ethethayo ukuba uThixo uyayikhohlwa i zethu izono. NgokukaDavide, uThixo usihlukanisile izono zethu kuthi "kude kusempuma kusempumalanga."
Okokuqala, kufuneka siqonde ukuba uDavid usebenzisa ulwimi lweengqungquthela kwindumiso yakhe. Oku akukona imilinganiselo enokulinganiswa ngamanani okwenene.
Kodwa into endiyithandayo malunga nokukhethwa kukaDavide ngamazwi kukuba udweba umfanekiso ongenamgama ongapheliyo. Kungakhathaliseki ukuba uhamba kangakanani ukuya empuma, unokuhlala uhamba esinye isinyathelo. Kuyafana nentshona. Ngako oko, umgama phakathi kwempuma nentshonalanga ungabonakaliswa kangcono njengomgama ongapheliyo. Akunakulinganiswa.
Yaye yileyo ndlela uThixo asuse ngayo izono zethu. Sahluke ngokupheleleyo kwizono zethu.
Ngoko, uThixo usahlukanisa kwizono zethu, kodwa kuthekani malunga nenxalenye yokulibala? Ngaba uyazihlambulula ngokwenene imemori yakhe xa kuziwa kwizono zethu?
Khangela oko uThixo ngokwakhe asixelele ngoIsaya umprofeti :
"Kanti awunambizanga, Yakobi,
Anikhathali ngenxa yam, uSirayeli.
Awuzange ndizise imvu yeminikelo yokutshiswa,
andihloneli ngemibingelelo yenu.
Andikuthanga umnikelo wokudla okuziinkozo
andinakukhathaza ngeemfuno zeqhumiso.
24Ningathenganga nasiphi na isiphunga elimnandi kum,
okanye wandibeka amanqatha emibingelelo yakho.
Kodwa undithwele ngezono zakho
kwaye wandinzima ngamacala akho.
25 "Mna, mna, nguye ovala
zakho izigwenxa, ngenxa yam,
kwaye akayi kukukhumbula izono zakho.
Isaya 43: 22-25
Ukuqala kwesi siqendu kubhekisela kwinkqubo yedini yeTestamente eNdala. AmaSirayeli phakathi kwabaphulaphuli bakaIsaya babonakala beyeke ukwenza izibingelelo zabo (okanye babenze ngendlela ebonisa ubuzenzisi), okwakungumqondiso wokuvukela uThixo. Endaweni yoko, amaSirayeli achitha ixesha lawo enza okulungileyo emehlweni abo kwaye ebeka izono ezingakumbi kuThixo.
Ndiyavuya kakhulu ngamazwi alumkileyo kweli vesi. UThixo uthi ama-Israyeli 'akhathele' emzameni wokukhonza okanye ukumthobela - oku kuthetha, abazange benze umzamo omkhulu wokukhonza uMdali wabo noThixo. Kunoko, bachitha ixesha elininzi besona kwaye bevukela ukuba uThixo ngokwakhe "waxhatshazwa" ngamacala abo.
Ivesi 25 ngumkhabi. UThixo ukhumbuza amaSirayeli ngobabalo Bakhe ngokumxelela ukuba nguYe oxolela izono zabo aze acime iziphoso zabo.
Kodwa phawula ibinzana elongeziweyo: "ngenxa yam." Ngokuqinisekileyo uThixo wathi awakhumbuli izono zabo, kodwa kwakungengenzuzo yamaSirayeli - kwakungenzuzo kaThixo!
Ngokuqinisekileyo uThixo wathi: "Ndikhathele ukuphatha zonke izono zakho nazo zonke iindlela ezahlukileyo kum." Ndiya kulibala ngokupheleleyo ukugqithisa kwakho, kodwa kungekhona ukukwenza uzive ungcono. izono ukuze bangasayi kuba ngumthwalo emagxeni am. "
Ndiyayiqonda ukuba abanye abantu banokuzabalazela ngezobugcisa kunye nembono yokuba uThixo unokulibala into ethile. Uyazi konke, emva koko, oko kuthetha ukuthi uyazi konke. Yaye wayenokukwazi njani yonke into ukuba ahlambulule ngokuzenzekelayo ulwazi kwiibhanki zakhe zedatha - ukuba uyalibala isono sethu?
Ndiyicinga loo mbuzo ochanekileyo, kwaye ndifuna ukukhankanya ukuba abaninzi abaphengululi beBhayibhile bakholelwa ukuba uThixo ukhetha 'ukukhumbula' izono zethu kuthetha ukuba ukhetha ukuba angenzi kuwo ngokugweba okanye ukujeziswa. Leyo yembono yokujonga.
Kodwa ngamanye amaxesha ndiyazibuza ukuba senza izinto zibe nzima kunokuba zifuna ukuba. Ukongeza kokwazi konke, uThixo unamandla onke - Unamandla onke. Unako ukwenza nantoni na. Kwaye ukuba kunjalo, ndingubani na ukuba ndithi uMntu onamandla onke akanakulibala into ayifunayo ukulibala?
Ngokomntu, ndikhetha ukuxhoma isithandwa sam ngamaxesha amaninzi kwiSibhalo esithi uThixo akayikusixolela izono zethu kuphela, kodwa ukulibala izono zethu kwaye angabakhumbuli. Ndikhetha ukuthabatha iLizwi laKhe, kwaye ndiyifumana isithembiso saKhuthuzelayo.
IiNko kunye noBuddha
Ukusebenzisana NeziHlomelo Ezinhlanu
Ukuzimela, Akukho Uzimeleyo, Yiyiphi i-Self?
Yintoni iArhat okanye i-Arahant eBuddhism?
Indlela yokuchazwa ngamakhadi eTarot
I-5 ye-Super Conservative Super PAC ngo-2012
Iintengiso ezinkulu kakhulu zikaKarl Marx
I-GDI + Iimpawu zeGraphic kwiVisible Basic .NET
Origen: I-Biography yoMntu Wensimbi
Asisonke Isityebi SinoMagnetic
Ukubhiyozela iMelika i-Recycles Day ngoNovemba 15
Ngaba Ukukhohlisa Isono Esamkelekileyo?
Iinqununu eziPhambili zoVavanyo ezili-15 zoKhetho oluninzi
Top Cinderella Iingoma ze-80s
IYunivesithi yaseWashington, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Kinematics ezimbini-i-Kinematics: Ukuhamba ngesicwangciso
Eyaziwayo zeOlimpiki Tennis Champions
Yintoni i-Smart Growth?
Izilwanyana zase-Amazon River Basin
Ukungahambisani kweVangeli likaYesu lokubethelwa
UKumkani Philip VI waseFransi
Indlela yokuthenga i-Corvette kuma-7 alula
Umkhonto ogqithiseleyo kunye nobutshongo Fantasy Anime